शनिवार, पुष १९, २०७६ लुम्बिनी टाइम्स
नेपाल भ्रमण वर्ष शुरु भएको छ । प्रदेश ५ सरकारले पनि लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मनाईरहेको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले चरणवद्ध कार्यक्रम गरिरहेको बताइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रदेश ५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीसँग गरिएको कुराकानी ।
नेपाल भ्रमण वर्ष शुरु भएको छ, लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ संग नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० कसरी जोडिन्छ ?
नेपाल भ्रमण वर्ष भनेर छुट्टै कार्यक्रम छ । त्यो कार्यक्रमहरुलाई आयोजना गर्दे गर्दा विषय त एउटै पर्यो‍। नेपाल भ्रमण वर्षमा आउने पनि पर्यटकहरु हो । पर्यटन व्यवसायलाई राम्रो गरी प्रवद्र्धन गर्ने गरी, दिगो विकास हुने गरी नेपाल भ्रमण वर्षले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । हाम्रो योजना भनेको पर्यटन ब्यवसायलाई राम्रो बनाउने उद्देश्य हो । लुम्बिनी एक नाम हो लुम्बिनीका नाममा धेरै पर्यटकहरु भित्राउन सकेमा ति पर्यटकलाई अन्यत्रै लैजान सकेमा धेरै राम्रो हुनेछ । यसो गर्न सकेमा यहाँका होटल व्यवसायीहरुलाई धेरै राम्रो हुनेछ । केही आर्थिक कारोबार पनि बढ्नेछ । गाईडहरुको पनि केही आम्दानीको स्रोत बढ्नेछ । भविष्यको पर्यटन व्यवसाय स्थीर गर्नको लागि पनि निकै राम्रो हुनेछ । त्यसैले २ वटैको एक आपसमा अन्तरसम्बन्ध छ । एउटा कार्यक्रम सफल हुँदा अर्को कार्यक्रम पनि सफल हुनेछ ।
प्रदेश ५ मा हामीसँग घुम्नको लागि त धेरै स्थान छन् । तर ती स्थान सम्म पुग्नको लागि सडक, खानेबस्ने सुबिधा लगायतका पुर्वाधारहरुको समस्या पनि छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले के गर्देछ ?
भौतिक पुर्वाधार निर्माणको कुरा राज्यले गर्नु पर्दछ । बाँकी व्यवस्थापनको कुरामा निजी क्षेत्रले नै गर्नुपर्दछ । सरकारले मार्गनिर्देशन गर्ने हो । कनेक्टीभिटिको सन्दर्भमा साधन स्रोतको मामलामा निजि क्षेत्रलाई काम गर्न सहजता शिर्जना गर्ने हो । हामीले प्रदेश ५ का सबै जिल्लाका लागि बुटवल तथा लुम्बिनीबाट छुट्ने गरी व्यवस्थापन गर्दै छौँ । हामीले निजी क्षेत्रलाई भनीपनि रहेका छौँ । जहाँ सम्म कनेक्टीभिटिको कुरा छ । लुम्बिनी बिकास संघिय सरकारको अधिनमा चल्ने भएकोले त्यहाँ हाम्रो खासै चल्दैन् । त्यहाँ बाहिरको चक्रपथको काम भईरहेको छ । त्यसको काम प्रदेश सरकारले गर्दैछ । यो एक उदाहरण हो । लुम्बिनी पुग्ने क्षेत्रमा २ वटा पुलअरु अलपत्र बनेका छन् । ति संघिय सरकारका योजना हुन् । हामीले त्यसको लागि समन्वय मात्रै गर्न सक्ने हो । भ्रमण वर्षको लागि बेलिब्रिजको योजना बनाएका थियौँ । तर ति बेलीब्रीजहरु पुल भन्दा छोटा भएकोले केही समस्या भएको हो । हामीले लुम्बिनी सम्म पुग्नको लागि २ पुलमुनि ह्याण्डपाईप हालेर भएपनि आउने र जाने व्यवस्था गर्ने योजना रहेको छ । वर्षाको ३ महिना बाहेक यो कामले केही सहजता ल्याउने छ । रानीमहलमा पुग्ने आधि बाटो पिच भएको छ । हामीले पैसा बिनियोजन गरेर निर्माण सम्पन गर्दै छौँ । अन्य पर्यटकीय स्थालमा पनि पुर्वाधारहरु निर्माण गर्दै छौँ । जस्तै तम्घास देखि रेसुङ्गा सम्म पुग्नको लागि पनि बाटोमा पुर्वाधार निर्माण गरेका छौँ । हामी संग चलिरहेको योजना हामीले काम शुरु गरेको अवधि देखि हालसम्म हामी सन्तोसजनक छौँ। हामी कमजोर भएजस्तो हामीलाई लाग्दैन् । सञ्चारमा काम भएन भन्ने कुरा आए । हामीले कार्यक्रमहरु घोषणा गरेअनुसार ति कार्यक्रमहरु भए वा भएनन् । कुन रुपमा भए भन्ने बिश्लेषण गर्नुपर्छ । म आफुमा सन्तुष्ट छु । हामीले गरेका कामले पर्यटक बढाउने काम भएका छन् । हामीले पर्यटक बढाउने मात्रै नभई हामीसँग लुम्बिनी छ भनेर प्रचार गर्ने काम पनि हाम्रो हो । लुम्बिनी छ लुम्बिनी संग जोडिएका अन्य साईटहरु पनि छन् भनेर प्रचार गर्ने हो । हामीले हाम्रा स्थानको महत्वको बारेमा सारा बिश्वलाई जानकारी गराउने हो । यो सबै सन्दर्भ हो । हाम्रा कार्यक्रमहरु सफल तरीकाले सम्पन्न गराईरहेका छौँ ।
पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन के गर्न सकिन्छ ? बिदेशी पर्यटक किन बढेनन् जस्तो लाग्छ ?
हामीकहाँ धेरै बिदेशी पर्यटक आउँदैनन् । किनकी काठमाडौ र भैरहवाको जहाज भाडा १४५ डलर रहेको छ । जुन निकै महंगो हुन आउँछ । यो १५ हजार हुन्छ । जुन काठमाडौबाट बैङ्कक पुग्ने भाडा बराबर हो । नेपाली नागरिकलाई बढीमा ६ हजार सम्मको भाडा छ । यो दोहोर व्यवस्थाले गर्दा बिदेशी नागरीकलाई समस्या परेकोछ ।जहाँसम्म पर्यटकको बसाई लम्ब्इाउने कुरा पनि हो । हामीसंग भएको हावापानीलाई हामीले प्रचार गर्न सकरिहेका छैनौँ । लुम्बिनी र तराईको गर्मिबाट ४५ मिनेटमै १५ डिग्रि कम तापक्रम भएको पाल्पामा पुग्न सक्छौँ । हामीले त्यहि किसिमको होटलहरुको ब्यवस्थापन पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ । हामीले पर्यटकहरुका लागि आवश्यक पुर्वाधारहरु बनाई सकेका छैनौँ । सरकारले आह्वान गर्ने हो । काम र लगानी निजि क्षेत्रले गर्दा राम्रो हुन्छ । बिस्तारै त्यो बाताबरण पनि बन्छ । पर्यटकहरु लामो समय बस्नेछन् ।
अन्त्यमा, यहाँले भ्रमण वर्षका सन्दर्भमा के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ ?
यहाँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत अनुरोध गर्न चाहान्छु, हामीले गर्न नसेका कमी कमजोरीहरुलाई बस्तुगत र यथार्थपरक हिसाबले कुरा सुझाब दिनुहोस् । हाम्रा क्रियाकलापहरुलाई प्रचारमा लैजानुहोस् । यहाँको पर्यटन ब्यवसाय फस्टाउँदा मुलुक समृद्ध बन्ने हो । आम नागरिकले पनि बिदेश पठाउनुको साटो सानो पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने हो । सबै निजि क्षेत्रलाई यो हिसाबले सोच्न आह्वान गर्न चाहन्छु ।
प्रकाशित मिति: शनिवार, पुष १९, २०७६, ०९:२५:२२
संस्कारको आवश्यकता किन ?
प्रदेश ५ मा लक्षण देखिएका कोरोना संक्रमित बढ्दै, कस्तो छ सरकारको तयारी ?
प्रदेश ५ र सं‌घीय मन्त्रालयको कोभिड–१९ ब्रिफिङमै फरक–फरक तथ्यांक, कसको पत्याउने ?
प्रदेश ५ मा समुदायस्तरमा देखियो कोरोना संक्रमण, लकडाउन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
कस्तो जनै किन लगाउने ?
सोमवार, श्रावण १९, २०७७ डा. मतिप्रसाद ढकाल
हिजो जनैमा साँचो झुन्डिए जस्तै आज थरमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्रको पहिचान झुन्डिएको छ भनेर पनि विश्वास गर्न नसक्ने परिस्थितिमा जनैको पहिचान सङ्कटमा पर्नु स्वाभाविक छ । यस किसिमको सङ्कटापन्न परिस्थितिमा जनैको महत्त्व कसरी बताउने र यसको संरक्षण कसरी गर्ने ? पुरा पढ्नुहोस्